Nhazi Obodo - Peeji nke 3 - Geofumadas
Ntugharị mpaghara. Atụmatụ atụmatụ mpaghara
Isi obodo nwetara ihe mgbake na Honduras
Site na Mee 26 ruo 28, a ga-enwe usoro maka atụmatụ nke Territorial Planning na mgbake nke isi obodo na ụzọ otu nchịkwa ala ga-esi mepụta ngwa ọrụ bara uru ka nke a wee kwụsị ịbụ abụ nke Hernando de Soto. Ihe omume a bu ihe ndi ...
Engineering in Surveying, dị na Guatemala
Ọtụtụ mba ahapụla n'ọhịa a, agbanyeghị na ha agabigala usoro dị iche iche nke imeziwanye nchịkwa nke ala, nke ọrụ nkwado mba ụwa na-akwadokarị. Okwu Guatemala bụ ezigbo mmega ahụ nke na-enye ohere maka mbọ ịchekwa ụlọ akụ nke ndị ọkachamara nwere ike ...
cadastre, Akụziri CAD / GIS, Land Management
Ugh, emesịrị m laghachi na njem m na Guatemala, ụbọchị ogologo ma agụmakwụkwọ, CD nke ụlọ ọrụ Lincoln nyere anyị bụ nke kachasị mma ... Mmekọrịta ... gburugburu ebe obibi m hụrụ aha ikike nke Mexico suchi ... ma ebe obu na ha enweghi obi ebere maka ichoro m ntutu, nke m chere na ...
Microstation-Bentley, Land Management, ọtụtụ
Na anyị na-aga n'usoro nlekọta n'ókèala
Nyaahụ m rutere Guatemala, ịga ọmụmụ ihe na "Iwu Iwu Ntọala Territorial", yabụ ebe a ọ ga-ewe m izu ụka ọzọ. Ihe ị ga-ekwu, ọ dị mma ịnọ ebe a ọzọ, n'agbanyeghịkwa na ọ fọrọ obere ka Ista, oyi na-atụ. Site na ụfọdụ ihe ọnụọgụ abụọ, mgbe ahụ, na ọdụ ụgbọ elu, ha jichiri m ...
Land Management, ọtụtụ
Ọchịchị nke n'ókèala
Afọ a na-amalite nke ọma, ọbụlagodi n'ihe gbasara ihe omume metụtara mpaghara njikwa ala. Mgbe ihe omume CONFEDELCA na-adịbeghị anya na El Salvador, onye mesiri ike na atụmatụ ala iji mee ihe maka mmepe obodo, nke ọzọ na-abịakwute anyị: Agụụ na Ntọala Iwu Maka Njikwa Ala A na-atụle ya maka ịtụle ...
Mbipụta mbụ nke magazin ọkachamara na Cadastre
Site n'inwe ezi ihe ịga nke ọma, anyị na-anabata mbipụta mbụ nke akwụkwọ akụkọ nke ndị ọkachamara Hibero-American na Cadastre, nke na-abịa iji jupụta nnukwu enweghị isi na gburugburu ebe ndị na-asụ Spanish n'okwu banyere cadastral, karịa okwu ahụ, nyocha na ịbịakwute sistemụ. Magazin a ka amụrụ n'okpuru ebumnuche nke ...
Nkwupụta nke akụkọ banyere Cadastre 2014
Mgbe naanị afọ asaa kewapụrụ anyị na ụbọchị ahụ nke e chere na ihe atụ 2014 Cadastre ga-abụ eziokwu mejuputara, anyị ka nwere nnukwu obi abụọ. Ọ dịkarịa ala minit 5 nye m ihe ùgwù nke nkà ihe ọmụma banyere ya ... M na-ekwe nkwa na ọ bụ naanị 5 nkeji :) Ọ bụrụ na anyị lelee ...
The sweet Taste nke Cadastre
Nke a bụ isiokwu DVD nke Diego Erba nyere m mgbe a gbara ajụjụ ọnụ oge gara aga mgbe ọ gara Honduras. Aha ahụ dịtụ edoghi anya, agbanyeghị ọdịnaya dị ụtọ ị toa ntị, ma hụ ebe ha bụ vidio ndị enyerela nke ọma. N'etiti ọdịnaya ya bụ: Territorial Cadastre; ...
Usoro nke Management Cadastral obodo
Nchịkwa mpaghara bụ ikike mpaghara, iwu nke ndị ọchịchị na-ekwukarị na ndị gọọmentị na-arụ ọrụ a. Ngbasawanye nke ọchịchị ma ọ bụ kansụl obodo, yana ọkwa dị iche iche nke mmepe, akụkụ nke ala, ikike ikike, njirisi ọdịdị na ikike njikwa na-eme ka ọrụ cadastral gafere akụkụ dị iche iche. A. tax okirikiri ...
Obere ihu Page 1 Page 2 Page 3
Gịnị bụ ohere na lonjituudu?
Kedu ihe dị iche n’etiti oke osimiri na oke osimiri?
Kedu ebe bụ ebe zuru oke na ikwu?